Rakkoon keenya Geggeessa moo saba bira?:Lati H. Hunde – Beekan Guluma Erena
Rakkoon keenya Geggeessa moo saba bira?:Lati H. Hunde	Beekan Erena
Language Category, Personal Category, Poems, Politics Category February 7, 2017OROMO STRUGLE
–Rakkoon keenya Geggeessa moo saba bira?–
Yeroo baayy’ee marsaa hawwaasaa kana irratti geggeessaa gaarii hin qabnu jenne haasona. Akkuma wal beeknutti walitti dhufnee yeroo wal arginu waa’eema geggeessaa gaarii dhabuu keenya dubbanna. Garuu sabni keenya hoo rakkoo qabaa laata jennee yeroo dubbannu badaa hin arginu. Geggeessaa gaarii fi cimaa nu barbaachisaa isa jedhuuf, eyyeen nu barbaachisa. Geggeessitoonni keenya hoo rakkoo qabu isa jedhuuf eyyeen qabu. Garuu barreeffamni koo kan xiyyeeffatu uummata irratti!
Rakkoo guddaa Kan ta’e Hoogggansa cimaa dhabuu qofa miti, sabuma keenya kanati rakkoo guddaa qabna. Namni amma garaagarummaa walii beekee waliif hin kabajnetti waliin deemuu hin danda’u. Garaagarummaan Amantii, garaagarummaan ilaalchaa saba kana keessa akka jiru hubatanii waliif kabajuun gara tokkummaatti nama geessa! Amma namni ija Oromummaa qofaan wal hin ilaalletti hooggansi cimaa yoo ka’es qofaa isaa waan godhu hin qabu; fiixaan ba’umsa argachuunis ni cima. Akka sabaatti ilaalchi keenya jijjiiramu qaba.
Biyya hambaa kana keessatti wanti mul’achaa jiruu baayy’ee fokkisaadha. Geggeessaa dandeettii qabu osoo hin taane, namni ganda keenyaa nu hoogganuu qaba Kan jedhan jiru. Keessumaa biyya hamaa kanatti yeroo baayy’ee akkaataa itti sabni keenya hawwaasa keessatti geggeessitoota filatu sirrii miti. Akka Paarlaamaa godina godinaan bakka buusu. Isaayyu godinni tokko uummata baayy’ee qaba yoo ta’e, geggeessitoonni harki caalaan achi keessaa filamuu qabu. Kun taa’umsa ykn aangoo qoqqooddachuudha malee hojii sirriitti hojjechuuf natti hin fakkaatu. Geggeessan akka dandeetti qabutti filamuu qaba malee godina godina irraa walitti funaanamuu hin qabu.godina godina irraa walitti funaanamuun kun uumanni keenya ganda gandaan akka wal qooduuf waan gumaache qaba. Danddeettii geggeessummaa haa qabaatu malee godina kam irraayyu yoo ta’e rakkoo waan qabu miti. Namni tokko geggeessaa ta’uuf amala fi dandeetti inni hawwaasa keessatti qabuti murteessa malee godina inni itti dhalate miti. Uummanni keenya ilaalcha akkasii irraa bilisa amma hin baanetti waliin fuul dura adeemuun ni cima. Nuti nama fuul dura nu adeemsisu barbaanna malee nama godina bakka bu’u miti. Gochi kun yoo itti fufe waa’ee Oromummaa keenya caalaa waa’ee godina keenyaa faarsuu eegalla; ammas darbee darbee mul’achaa jira. Daagim Mokonnan sirba isaa keessatti, “Kutaa irraa dhalatu malee kutaan nun dhaalu; gandaan nan waamiinaa Oromticha abbaan koo” jedha. Kan qabsaa’aa jirru akka Oromootti malee akka gandaatti miti. Kanaaf geggeessan nu barbaachisus Kan Oromoo akka Oromummaa isaaniitti fuudhee fuul dura adeemu malee kan akka gandaatti bakka bu’u miti. Yeroo tokko tokko geggeesitoonni yeroo isaan aangoof jedhanii nama godina isaanii dadammaqfatan argina. Ilaalchi nama dhuunfaa kun uummata booji’uu hin qabu. Geggeesitoota akkasii kana dura dhaabbachuu danda’uun saba keenya irraa barbaachisa. Ilaalchi keenya fi dhaabbiin keenya cimaa yoo ta’e, milkaa’uuf nun rakkisu.
Yaada koo xumuruuf akka ilaalcha kootti, sabuma keenya kanati rakkina ilaalchaa qabna malee hooggansa cimaa dhabuu keenya miti rakkoo guddaan! Kanaaf mee koottaa ija Amantiin ykn ija dhaaba siyyaasaan wal ilaaluu dhiifnee ija Oromummaa qofaan wal haa ilaalu; waliin haa hojjennu! Na ofkalchaa!
← BALAA DHIIRUMMAA OFIITTI FAYYADAMUU DHABUU DHIIROTAAN UUMAMEE FI HIREE DUBARTOOTA EEGGATU.Galaanaa Kiisiitiin
Jechoota Afaan Oromoo hiika gaggabaaboo faana. Keessumattuu,Lqoda kaaba Oromiyaati. →